Orinasa mpihazona brochure akrilika | China Acrylic Brochure Holder mpanamboatra, mpamatsy
Anaran-javatra: Holatra fampisehoana solomaso slatwall acrylic
Fitaovana ara-pamokarana ： 3mm ravina acrylic vaovao
Ampiasao: Asehoy ny solomaso / solomaso / solomaso
Size: W2-1 / 2 * H11 ″, ny habe sy ny hateviny dia azo namboarina
Baiko ： Tongasoa
Ity mpihazona akrilika mazava 4,5 x 7.25 x 2.5 mazava ity, fampirantiana brochure acrylic dia mety amin'ny toerana tery na feno olona.
Fampandrenesana Brochure Display Stand Holder dia mitazona brochure na pampletera roa ambin'ny folo isan-tsokajy.
Moa ve mila orinasan-trakitra ny orinasanao hanolorany taratasy kely samihafa ho an'ny mpanjifa?
Ianao ve mila takelaka brochure misy endrika tsy manam-paharoa nefa mandaitra?
Ity mpihazana trakta ity, izay fantatra ihany koa amin'ny fijoroana bokikely na fampisehoana ravin-taratasy, dia asaina ampiasaina any amin'ny birao, lobby, foibe fiarahamonina, na toerana fivarotana.
Ny tontonana mazava sy ny lafiny acrylic mainty dia manamboatra fitaovana tsy miandany izay mifangaro amin'ny fomba na lohahevitra rehetra.
Tompon'ny Brochure rakitra mangarahara akrilika
Ny famolavolana mangarahara dia ahafahanao mahita ilay fisie raha vao jerena, ny famolavolana hainganana dia mahatonga ny vokatra ho mora mihetsika.
Ny brochure akrilika mazava miorina amin'ny rakotra ravina ravina dia natao ho an'ny mahamora sy mahamety azy.
Izy io dia azo ahantona amin'ny rindrina izay misy toerana tsy ahitam-bokatra na apetraka eo ambonin'ny latabatra mba hitaomana ny olona haka ny iray amin'ireo bokinao.
Ny fijoroana brochure tsy azo vakyina dia sarobidy amin'ny orinasa rehetra izay miankina amin'ny takelaka sy brochure hampiroborobo ny vokatra sy ny serivisy ao aminy.
Ny Acrylic Brochure Holder dia vita amin'ny akrilika mazava, ny vokatra dia manana fahamendrehana tsara, ny fanoherana, ny fanoherana ny fihodinana, ny faharetana, ny fanoherana ny harafesina, ny fanoherana fanoherana ary ny fanadiovana mora foana.
Ny famolavolana mangarahara dia mamela anao hahita ilay fisie raha vao jerena.
Ny famolavolana ny tahony dia mahatonga ny vokatra ho mora mihetsika. 4-sosona feno mangarahara fitahirizana fitoeran'entana.
Mora ny manasokajy sy mitahiry. Afaka mandray antontan-taratasy momba ny birao A4, fifanarahana ara-barotra, boky, magazine ary antontan-taratasy kely kokoa.
Tompon'ny boky akrilika
Ny tompon'ny boky akrilika dia vita amin'ny akrilika mazava miaraka amin'ny sisiny voalamina.
Izy io dia ampiasaina amin'ny fanohanana boky manokana momba ny boky fivarotam-boky, talantalana famoahana boky vaovao, fijerena dokambarotra, rakotra birao mitsivalana birao, birao fampirantiana ary birao fampirantiana.
Ity mpihazona boky akrilika ity dia vahaolana mety indrindra amin'ny fametrahana bokikely eo amin'ny latabatra na latabatra.
Izy io dia fomba tsotra, mora, mahomby, ary mahomby amin'ny fampisehoana ireo flyers ireo izay mazàna manao birao na toerana fivarotana toa misavoritaka sy tsy voalamina.
Boky fandefasana akrilika
Ny bookends dia lehibe amin'ny 6 ″ ny halavany ary 6 ″ ny sakany miaraka amina endrika T endrika farany.
Ataovy milamina ny bokinao, mitsitsia fotoana.
Ny akrilika matevina dia mateza mitazona boky lehibe sy mavesatra.
Mitsangana amin'ny fomba mitsangana handamina ny bokinao mba tsy ho mora tendren'ny boky.
Ny fijery mazava dia saika mahavariana fa kanto ary tsara amin'ny fikarakarana ny Boky, Gazety, Resipeo, Sarimihetsika, CD ary Lalao Video.
Fako akrilika, Asehoy Acrylic Stand, Boaty akrilika, Stand Acrylic Display, Asehoy Acrylic Stand, Asehoy acrylic,